Arabia Saodita: “Voarara ny fanaovana fihetsiketsehina ato anatin’ity firenena ity” · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita: “Voarara ny fanaovana fihetsiketsehina ato anatin'ity firenena ity”
Voadika ny 08 Marsa 2011 9:31 GMT
Vakio amin'ny teny Français, اردو, বাংলা, македонски, Español, English
Namoaka fanambarana mandrara ny hetsi-panoheram-bahoaka ny filan-kevitry ny mpitondra fivavahana.
@Almatrafi dia nizara ilay fanambarana avy amin'ny fikambanan'ny Mufti Sheikh Abdul-Aziz Al al-Sheikh ao amin'ny Tweetmailaka [Ar]:
Manamarina ny filankevitry ny mpitondra fivavahana fa voarara ny fanaovana fihetsiketsehina ato anatin'ity firenena ity. Ny fomba mahitsy anatin'ny sharia (lalàna Islamika) amin'ny fanatanterahana ny tombontsoa iraisana dia ny fanoloran-kevitra, izay napetraky ny Mpaminany Mohammad,
Mitohy ny fanambarana:
Ny fanovana sy ny toro-hevitra dia tsy tokony avy amin'ny fihetsiketsehina sy ireo fomba mampisara-bazana sy mampisy fifandirana, izany no nampianarin'ireo mpanabe ara-panahin'ity firenena ity taloha sy ankehitriny sy nampitandremany
Nahatonga fihetsehim-po mifofofofo be avy amin'ny mpi-tweet Saodianina izany fanambarana izany, amin'ny teny fototra #saudimataleb sy #Kebaralolama. Ireto ny sasany:
Tsy dia fantatro loatra ny tena famaritana ny hoe filankevitry ny mpitondra fivavahana na ny fiandanian'izy ireo na koa ny fisainana ananany!!
Amin'ny fotoana hidinan'ny saro-tava sy hipoiran'ny marina, tonga ny filankevitry ny mpitondra fivavahana nanala ny saro-tavany rehetra ary nanary ny fitokisana azy
Fihetsiketsehina lehibe indrindra ny Hajj, midika ve izany fa voarara koa izy?
Ry filankevitry ny mpitondra fivavahana, maninona raha manakombom-bava ianareo ary mankafy vary amin-dronono, izay tsara ho an'ny fahasalamanareo.
Nanary ny fotoana fanararaotra hamerenana indray ny voninahiny ny filankevitry ny mpitondra fivavahana
Oadray izany fahadisoanareo ry filankevitry ny mpitondra fivavahana! Maniry aho hoe afaka hiteny fa voalohany iny nataonareo iny… Alefako any amin'I Allah ny fitarainako
Ary ny farany dia manontany i @SaudiLawyer:
“Nanamafy ny filankevitry ny mpitondra fivavahana fa voarara ny fanaovana fihetsiketsehina ato amin'ity firenena ity.” Misy afaka hanazava ahy ve ho'aho maninona no “ato amin'ity firenena ity” fotsiny?